IC ရေ.. သေပြီဆရာ..။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Critic » IC ရေ.. သေပြီဆရာ..။
IC ရေ.. သေပြီဆရာ..။
Posted by kai on Dec 2, 2011 in Critic, Music | 56 comments
ဒီနေ့အလုပ်က ပြန်လာတော့.. လမ်းမှာထုံးစံအတိုင်း ကားမောင်းရင်း.. သတင်းနားထောင်ပါတယ်..။
အများဆုံးနားထောင်ဖြစ်တာက..NPR ပေါ့.။ တနိုင်ငံလုံးလွှင့်တဲ့.. အစိုးရကတလေးတစားနားထောင်နေတဲ့.. ရေဒီယိုသတင်းဌာနတခုပါ..။
“အို..ဒီဇင်ဘာ ကိုယ့်ရင်ခွင်မှာ…”ကြားလိုက်ရတော့.. ဟ.. ငါများရေဒီယိုနဲ့.. စီဒီမှားဖွင့်မိသလားပေါ့..။
ဆက်နားထောင်တော့.. မြန်မာပြည်က.. ကော်ပီခိုးချထားတဲ့သီချင်းတွေအကြောင်း ဆွေးနွေးနေတာခင်ဗျား..။
အဲဒါက.. Collective Soul’s ရဲ့ Decemberကို ခိုးချထားတာတဲ့..။
ဒေးတွန်ယူနီဗာစတီက.. မြူးဇစ်ပါမောက္ခတယောက်..မြန်မာပြည်သွားမွှေလာပြီး စာအုပ်ရေးထားတဲ့အကြောင်းလည်း ပြောပြတယ်..။
သူတို့ပြောတဲ့အထဲ.. ခိုးကူးသီချင်းတွေက.. စီးပွားရေးအရ ရောင်းကောင်းထားတာလည်း ပါတယ်..။
Madonna – Like A Virginလည်းပါတယ်..။ Shakira ရဲ့ Whenever, Wherever.ကော်ပီလည်း ပါတယ်.။
ဆိုတော့.. ဒေါ်ကလင်တန် မြန်မာပြည်လည်လည် ၀င်သွားလိုက်တာ…
ကြည့်ရတာ.. ရှေ့နေ… ဥပဒေသမားတွေတော့.. ဆော်ဖို့..ရိတ်ဖို့.. အဆင်သင့်ဖြစ်သွားပြီထင်မိကြောင်း…
မက်ခ်ဒါနယ်အတု..။ ကိုကာကိုလာအတု.. အတုဆရာတွေ.. ကော်ပီဆရာတွေ.. ဒီနှစ်ပိုင်း ထိမ်းထိမ်းလေး…လုပ်သင့်ကြောင်း..။
ကိုရီယားမင်းသားနဲ့ ရုပ်ရည်က တပုံစံတည်း ချွတ်စွပ်တူနေရင်ကော တရားအစွဲခံရနှိုင်ပါသလားခင်ဗျား …။
ကျွန်တော့မှာ စိုးရိမ်စရာ ဖြစ်နေလို့ပါ …။
ဟ..၀ုတ်တာပေါ့ ၀ုတ်တာပေါ့ စိုးရိမ်စရာပါ
ဖြိုးနဲ့ ချွတ်စွတ်တူနေရင်တော့ မောင်ပု ပွဘီဂျ
နာတို့ လော်ကာဒွေ တိတ်ခါကျဘီ..နောက်ခါ ကူးနဲ့ တော့နော့..
သဂျီးကတော့ ညှော်တိုက်ပီ ….
ဖတ်ပီး ပြန်ရေးလိုက်လို့ ဗမာပြည် မပြန်ရဲဒေါ့ရင် ….ခက်ရိချည့် …..
(ကစ်သို ..ကစ်သိုအလှည့်ဗျာ ဒီတခါ …..)အာဟိ
ဖတ်စေဂျင်ရင် စာအုပ်ကလေး မစပါလားခည…
ခုဒေါ့ ဒါလေးဒွေ ဖတ်ပီး အာသာဖြေနေရတယ်…
မူရင်းစာအုပ် ရှာကြည့်တော့ ၅၅ဒေါ်လာတဲ့ဗျာ ….(ဗမာပြည်ထိသွားပီးလေ့လာပီးရေးရတာဆိုဒေါ့ခရီးစရိတ်
သည်နှစ် one of the best sellers စာရင်းဝင်တဲ့
Enchantment: The Art of Changing Hearts, Minds, and Actions တောင် ၁၅ဒေါ်လာပဲရှိတယ်…ဟွန်း…
တော်ဘီဂျာ …. အိပ်ပီ ..
ကိုယ်က ကြိုမြင်လို့ ပုတ်ထားပြီးသားလေ။(^^)
(ကျန်းမာခြင်းသည် လာဘ်တပါးတဲ့ ရေးစရာလား)
သူကြီးကလည်း ကျနော်လို ဇာတ်လမ်းရိုက်ပေးလိုက် ပေါ့။
ဒီမှာလည်း ဂျပန်သီချင်းတွေအဲလက်စ်တို့ ကိုရင်ဂို၊တို့ကအများကြီးဆိုထားတယ်လေ။
ဂျပန်မီဒီယာကဆရာ တယောက်ကမေးတယ် ။ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲတဲ့။ဘယ်ရမလည်း သစ်မင်းဘဲ ။
ဆရာရေ အဲဒီလူတွေက ဂျပန်တွေနဲ့ ချစ်သူတွေဖြစ်ဘူးကြတယ်။
ပြီးတော့ သူ့နိုင်ငံနေမယ်၊ကိုယ့်နိုင်ငံနေမယ်နဲ့ ကွဲသွားကြတော့ လွမ်းလို့မြန်မာစာသားလေးထဲ့
ပြီး “အပျော်”ဆိုတာကို ထုတ်လုပ်သူကသဘောကျပြီး အခုလိုဖြစ်ရတာပါ၊.။သူတို့ကသနားစရာ
ကောင်းတဲ့ ချစ်တတ်လွမ်းတတ်သူတွေပါလို့ (^^) ဟဲဟဲ၊ ဟိုဆရာတချက်ငိုင်သွားတယ်။
ဟုတ်လေမလားပေါ့နော်။ (အတည်ပေါက်ကြီး လွှတ်နေတော့ ညင်းရမှာအားနာပုံပါဘဲ)
အဲဒီလို ထိန်းထားတယ်။သူကြီးလဲ ကြည့်လုပ်လိုက်ပေါ့ဗျာ။
ဟဲဟဲ …နည်းနည်း အစဆွဲထုတ်လိုက်ဦးမယ်….
တချို့တွေများ ပါးပါးလေး ခိုးတာခည ….
Richard Marx ရဲ့ piano frame လေးတို့ …
Slash ရဲ့ pentatonic scale တို့ ..အံမယ် ခပ်တည်တည်ဘဲ …..
အလုံးလေးတွေ ဖြည့်တာ ဖြုတ်တာတောင်လုပ်လိုက်သေး…..
အဲ့ တချို့ ခိုးနည်းကျ ပိုဆြာကျတယ်ခည…
Verse ဒါမှမဟုတ် intro ရဲ့ 8bar စာလောက်ကို Chorus အနေနဲ့ ဖြည့်စွက်ဖြတ်ညှပ်ကပ်တာ …
melody လေးတွေ လှမှလှ …..
ခေါင်းကွဲမှာ စိုးလို့ ….ဒီတေးလ်ရှင်းတော့ဝူးနော…
အိုင်စီပထမဆုံးအခေါက် ယူအက်စ်လာတော့.. အယ်လ်အေပွဲ ဗီဒီယိုကင်မရာလေးကိုင်ရိုက်နေတာပေါ့..။
အဲဒါ.. ကိုလေးတို့.. အပြတ်လည်းစဟဲရော.. အသံအင်ဂျင်နီယာက.. ဘိုလေးတယောက်ခင်ဗျ..။ စိတ်ပျက်လက်ပျက်ကြီး လာမေးတယ်..။
ဘယ်ရမလည်း.. ငါတို့ရွာက.. အာမေချာတွေပါလို့.. လုပ်ချလိုက်တယ်..။
ခဏနေတော့.. ကိုချစ်စမ်းမောင်.. ပညာစွမ်းပြပါလေရော..
NPR တော့ ကြည့်ကျက်မလုပ်ရဲပါဘူး..။
မြန်မာပြည်သွားပြီး.. အိုင်စီအဖွဲ့နဲ့..လှည့်ပါတ်ဗျုးထားတာကြီး..တရားရုံးသက်သေတင်ပေးလိုက်လို့.. ကိုယ်ပါဆွဲစေ့ခံနေရမယ်..။
ရုံးပိတ်ရက် အိပ်မလား တွေးပါတယ်
အိပ်လို့ရ၀ူး ..ဟိုဘက်မှာ ဆြာသော့ က ညွှန်းလိုက်
ထ မန့်လိုက် သဂျီးက အစဆွဲထုတ်လိုက် ပြန်မန့်လိုက်
ဟုတ်နေတာပဲ … နေပါဦး ..အခု မန့် ထားတာ ကို စောစောက
ကြည့်တော့ အာဟိ..။ မှာဆုံးတာပါ ဘယ့်နှယ့် ခုပြန်ကြည့်တော့
အိပ်ထမတင် ကိစ္စပါလာရတာတုန်း…. အော် သဂျီးကိုး .သူ့ ကိုယ်ပိုင် ပို့စ်ကိုး…
သဂျီးတို့ ဘုန်း မိုးသို့ချုန်း …
တော်ကာ က ဘာကိစ္စ နဲ့ ကျရမှာလဲ
အေးကေကေ ရဲ့ 
လေးဖြူကတော့ပြောတယ် ကော်ပီဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်ဖြစ်ဖြစ် အတူတူပဲလုပ်လိုက်လို့ မေတ္တာတွေ အပို့ခံလိုက်ရသေးတယ်။ မနည်းပြန်ရှင်းယူရတာ။
ဒီဟာလေး ထပ်ပြီး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရေးသင့်တယ်။ ဒါမှ အလွယ်ခိုးချပြီး ဂရမ်မီ ရချင်တယ်ဆိုတဲ့ မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ရေသာခို အချောင်လိုက် ဆင်ဒရုန်းကြီး ပျောက်ဖို့ အစလုပ်ပေးသလိုဖြစ်မှာ။
ဒီထဲမှာ ဂီတနယ်ပယ် (သို့) ဂီတနယ်ပယ်နဲ့ နီးစပ်သူ တယောက်ယောက်က ဖတ်မိပြီး နောက်နောင် ဆင်ခြင်ပြုပြင်ဖို့ကို ပြန်ပွားပေးရင် ကောင်းမယ်။
ပြောမယ့်သာ ပြောရတယ် ထွက်ပြီးသားခွေတွေကို ပြန်လိုက်နေရင် ရထားတာနဲ့ လျှော်လို့တောင် လောက်မယ် မထင်။
ဇော်ဝင်းထွဋ် က ကြိုသိလို့လား မသိဘူး နောက်ပိုင်း ကိုယ်ပိုင်လေးတွေ ဖန်တီးလာတယ်…မြန်မာပြည် မှာ Rock ဂီတ စတင်သယ်ဆောင်လာခဲ့တဲ့ ဂီတ ဘိုးအေ ကြီးတွေကစပြီး ဒီကနေ့ ဟစ်ဟော့ ဂီတ အထိ ဘယ်သူမှ မလွတ်ဘူး .. ကိုယ်ပိုင် သံစဉ်ပါလို့ ကြွေးကြော်ခဲ့တဲ့ ထူးအိမ်သင်တို့ ခင်မောင်တိုးတို့တောင်မလွတ်ဘူး ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်နဲ့ သိပ်နာမည်မကြီးတဲ့ မာရဇ္ဇ တော့လွတ်မယ်ထင်တယ်…. ဂျပန်မှာ ic သွားဆိုတော့ ကိုယ်ပိုင်သံစဉ် ဆိုပေးပါလို့တောင်းဆိုတော့ ဘာသီချင်းမှမရှိလို့ ထူးအိမ်သင်ရဲ့ ဧရာဝတီ သီချင်းကို ဆိုခဲ့ရတယ်ကြားဘူးတယ်… ခုနောက်ပိုင်း ic လဲ ကိုယ်ပိုင်လေးတွေ ဖန်တီးလာပါပြီ.. ပရိတ်သတ်ကို စော်ကားခဲ့တဲ့ ic က ကိုရီးယားကို ၀င်ခွင့်ဗီဇာ ပိတ်ခံထားရတယ်…
ကိုညီထွဋ် ပြောတာတခု ဖတ်ဖူးတယ်..
နိုင်ဂျံဂါး ကို တွားရင် ကိုယ်ပိုင်သီချင်း မရှိလို့ .ရှက်တယ် ဆိုပီး
နိုင်ဂျံဂါး ခရီးစဉ်တွေ အတော် ရှောင်ပါတယ်တဲ့ …..
သွားရင်လည်း ကိုယ်ပိုင်သီချင်း ဆိုနိုင်အောင် အဲ့သည့်ဗျူးနောက်ပိုင်း အုန်မ်းတွေဘဲ
လုပ်ပါတယ်တဲ့ … ဟုတ်လည်းဟုတ်ပါတယ် …အချစ်များသူ့ဆီမှာ အနှိုင်းမဲ့
အဲ့သည့်ခေတ်ကစလို့ မိုးထဲ …၀ိုင်ချိုချို အချစ် .အထိ
ခုဆို သူ့မှာ ကိုယ်ပိုင် သီချင်း အလောက်အငှ ရှိနေပြီမဟုတ်ပါလား..
ဟိုတလောက စလုံးရှိုးဆိုတွားတာ ကြည့်လိုက်ရပါ့ ..ဗျား…
သူကြီးရေ မြန်မာသီချင်းတွေကော်ပီက အခုမှမဟုတ်ဘူးဗျာ။
စစ်ချီသီချင်းတွေ( စိန်ကြည်နော် စိန်ကြည်နော် လင်ယူပက်စက်သည် မာစတာက တိုကျိုပြန် )
နောက် ရှေးက ခေတ်သီချင်းကိုဖျက်ဆိုကြတာရှိတယ်လေ(အပ္ပနားရေချုိးသွားဆပ်ပြာခဲ့မေ့.)
နောက် ၀င်းဦးဆိုတာဗျာ လွမ်းငွေ့ဝေေ၀ တဲ့ အဲဒါက ဘိုလဲရိုးဆိုတဲ့သီချင်းတဲ့။
နောက်ရှိသေးတယ် ကောလိပ်ဂျင်နေ၀င်းနာမယ်ကြီးကား ပယင်းရောင် ထဲက ဇာတ်ဝင်သီချင်း
ပိုရှက်စရာကောင်းတာက မဟ၀ါ ရဲ့ ၀ါကာဝါကာ သူများရေးထားတဲ့သီချင်းအတွက်
အဲတော့ ကာမြန်မာပြည်က ကော်ပီတွေဆိုကြတာ အခုလေးဖြူတို့မှမဟုတ်ဘူး ဟိုရှေးကတည်းကဆိုတာ
သူများဟာကို သူများဟာလို့တော့ ဖွင့်ပြောရမယ်။
ကော်ပီကူးတာကတော့ မြန်မာပြည်မှာ မထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စပါ။
အဲလို အခိုးခံရတဲ့ထဲမှာ ကိုယ်ေ၇းတဲ့စာတောင်ပါသေးတာလက်တွေ့ဘဲ လေ သူကြီးရဲ့။
မြန်မာသံစဉ် စစ်စစ် သီချင်းတွေထဲက စာသားတွေကလဲ ရှေးတုန်းက စာဆိုတွေရဲ့ ကဗျာထဲကနေယူသူံးကြတာ။
အဲဒီအကြောင်းသိချင်ရင်တော့ ကျနော်ရေးတဲ့ ဂီတဆိုဒီကကြောက်ပြီကို ပြန်ရှာဖတ်ကြည့် လိုက်တော့ ။
အဲဒါလေးက 25-3-2011နေ့ထုတ် မန်းလေးတိုင်းဂျာနယ် VOL(4) Ser:15 မှာပုံနှိပ်ပြီးပါပြီ။
အဲဒီ လိုဘဲ စစ်သီချင်းအလိုက်တွေအကုန်နီးပါး ဂျပန်က ပါချင်ကိုဆိုင်(လောင်းကစား)တွေ
မှာအမြဲဖွင့်ထားပါတယ်။ ဂျပန်ရောက်မြန်မာများအတွက်တော့လူတိုင်းသိတဲ့ အံ့ဖွယ်သုတပါ။
NPR က ပုဂ္ဂိုလ်များက မြန်မာပြည်အကြောင်း စိတ်ဝင်စားပုံ ပေါက်တယ်။ မြန်မာပြည်နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ သတင်းကောက်နှုတ်ချက်၊ တွေ့ဆုံခန်း ခဏခဏပါတယ်။
မစ္စတာဂီရေ… သဂျီးညွှန်းတဲ့ စာအုပ် မဝယ်နိုင်လည်း ခိုးကူးထုတ်တဲ့ စာအုပ်ရှာကြည့်ပေါ့ဗျာ။ နာမည်ကြီးရင်တော့ ရကောင်းပါတယ်။ ဟေ့ သခင်မျိုးဟေ့ တို့ဗမာ…ခိုင်းတိုင်းမလုပ်နိုင်ဘူး… :eek:
ကိုရင်ဂီဂီက..၅၅တဲ့..ဘယ်လိုကြည့်ကြည့်.. ၈၅ဖြစ်နေလို့.. ကြည့်ရတာ ရှေ့နေတွေဝယ်မယ်ထင်လို့.. ဈေးတင်ထားတာလားမသိ…
မြန်မာက.. ကော်ပီရိုက်လက်မှတ်ထိုးရမဲ့..အချိန်တွေနဲ့အကိုက်..အာဆီယံဥက္ကဌအဖြစ်မှာ.. ယူအက်စ်ဆန်ရှင် မ,လိုက်ရင်.. ယူအက်စ်မီဒီယာကြီး NPR မှာ သက်သေအထောက်အထားအဖြစ်ကျန်နေပြီး.. ၀င်ငွေသိန်းချီဝင်ထားတာတွေက.. အရင် ဂွိမှာဗျ..
ဂွိလိုက်ရင် .. ဂွကျကုန်မှာ..
55ဆို ၀ယ်ပေးမပေါ့လေ…..ရော့ သဂျီးရော့ …
ဆောင်းပါးတွေ လိုက် ဖတ်အပီးမှာ
ရှက်လွန်းလို့ ..မျက်နှာ စောင်နဲ့ဝှက်ပီး …. ပြန်အိပ်သွားပါကြောင်း ….
သူများ ပွတ်ရင် ပွတ်လိုက်တာပဲ
သူများ ဖော်ရင် ဖော်လိုက်တာပဲ
အင်္ဂလိပ်ခေတ်က သက္ကလပ်ကုတ်နဲ့ ပုဆိုးမှာခါးပါတ်ကြီးပါတ်ပြီး
ပန်းပရှုး ဆိုလားဘာလား ရှုးဖိနပ်နဲ့ တော်တော်ဂွကျမယ်ပုံ
မြန်မာတွေမှာ အော်ရီဂျင်နယ်က ဘာရှိသေးလဲ
ခန္တာ နဲ့ အ၀ှာပဲ ရှိတော့တယ် ……………
ကိုဘီလူးရေ ခန္တာနဲ့ အ၀ှာတောင် တချို့တွေ စီလီကွန်တွေနဲ့ ပြုပြင်နေကြ့ပီဆိုတော့ အားလုံးကော်ပီလို့တောင် ပြောရမလိုဖြစ်နေပြီ။
IC ကိုတော့ သေအောင်မလုပ်ပါနဲ့ လားဆရာတို့ ရေ….
အနော် ကIC ခရေဇီလေ…..
သီချင်းရေးဆရာက နိုင်ငံခြားသီချင်းကိုဘာသာပြန်ရင်ပြန် မပြန်ရင် စာသားသွတ် ပြီးရောင်း။
အဆိုတော်လုပ်သူက ထုတ်လုပ်သူဆီက ကြေးကြီးကြီးတောင်းပြီးသီချင်းခွေထုတ်။
ထုတ်လူသူက လည်း တစ်ခွေ 1500-2000နဲ့ရောင်း။
အဲတော့ ခိုးကူးတဲ့ ကောင်ကလဲ တစ်ထောင်ဘိုးလေးချပ်နဲ့ပြန်ရောင်း။
ဓါတ်ပုံကာဗာမပါတာကလွဲရင် အထဲကခွေကလဲအတူတူ(တရုပ်ခွေတွေ) ကွာလတီကလဲအတူတူ။
မူရင်းခွေက အသံမပါရင်ထစ်ရင်ပြန်လဲလို့ မရ။
လမ်းဘေးခွေက အစင်းသာ မပါလို့ကတောပြန်လဲပေးတယ်။
ဒီအထဲမှာ အဆိုတော်မမ တစ်ယောက်က သူုခိုးခွေတွေလို့ အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပြော။
နောက်တစ်ယောက်ကလဲ ခုိးကူးခွေဝယ်တာ အကုသိုလ်ကျူးလွန်တာဘဲဆိုပြီး အင်တာဗျုးမှာပြော။
ခင်ဗျားတို့ကရော မူရင်းသီချင်းရေးသူဆီမှာ ခွင့်တောင်းပြီးမှဆိုသလားပေါ့လေ။
(သီချင်းရေးခ ပေးတာ မပေးတာ မပြောသေးပါဘူး)
ဂီဂီပြောနေတဲ့..အဲဒီစာအုပ်ထဲ..အဲဒါတွေ တော်တော်များများ ပါလောက်တယ်..။
ခိုးကူး..ဂျာအေးသူ့အမေရိုက်..ပျောက်နိုင်တဲ့.. အဖြေပါလိုချင်ရင်.. မြန်မာပြည်..ဂီတအစည်းအရုံးက.. အဲဒီပါမောက္ခကို.. မြန်မာပြည်ဖိတ်ပြီး အကြံဥာဏ်တာင်းရမယ်ထင်တာပဲ..။
ဒေါ်လာ သောင်းဂဏန်းတော့ ရင်းရလိမ့်မယ်..။
ဘာ ဂီဂီပြောတဲ့ စာအုပ်လဲ သဂျီး …
အဲ့လာ သဂျီးပြောတဲ့ စာအုပ်ပဲလေ….
၈၅ ဆိုလို့ ၅၅ ရတဲ့နေရာလည်းပြရသေးတယ်…
ရွာသူားများ အဲ့လာသာကြည့်ကြဘာ ….
အတိအကျ ပြောလာတော့ သူမဟုတ်သလိုလို …တခြားစာအုပ်လိုလိုနဲ့
သိုင်းကွက် ပြောင်းခင်းပစ်တယ်…. ဟွန်း….
ရေဘွဲ အရှင်တွေ စားပီး ကျင့်ထားလို့ထင်တယ်….
သိုင်းကွက်တွေက စုံလိုက်တာ ……..
ကိုယ်ပိုင် သံစဉ်တွေများများ ဖော်ထုတ်ကြပါလို့ပဲ ပြောရမလားပဲ..
ချို မိုင် မိုင် ကကော ကိုယ်ပိုင် သံစဉ်လား ကော်ပီလား..
ဟိုလူတွေ ကော်ပီဆို.. ဒီလူတွေ ကော်ပီဆိုး… ငါတို့လည်း ကော်ပီဆိုမလို့ သီချင်းတစ်ပုဒ်တော့ချန်ထားပေးပါ….:D
့ဒါနဲ အခု လေးဖြူ က လင်းလင်း ရေးတဲ့ သီချင်တွေပဲဆိုတော့မယ်လို့ ပြောထားတယ်ဆို..
လင်းလင် က ကိုယ်ပိုင်သံဇဉ်တွေ မဟုတ်ဘူးလား….
လင်းရဲ့ လင် က တော့ ကိုယ်ပိုင် တံစဉ် နဲ့ လယ်ကွင်းထဲမှာ ရိတ်သိမ်းနေလေရဲ့ 
လင်းလင်း က တော့ အဲ့လို ပြောတာဘဲ ။ ဟုတ်မဟုတ်တော့ မသိ
အစောပိုင်းကတည်းက စည်းကမ်းစောင့်ထိန်းခဲ့ကြရင် ….ဂလောက်ဘဲ တတ်တယ် ဂလောက်ပဲ ချပြမယ်
(three-chord-pop-metal လေးတွေလောက် ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လို့ ပြောရင် ချိတ်ချိုးမှာလား …
ခုတော့ ….ခုတော့ ….ခုတော့ …..
အဲဒီကော်ပီတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ မူပိုင်ခွင့် နဲ့ပတ်သက်တာ ကို မြန်မာပြည်ကတေးရေးတစ်ယောက်နဲ့
အင်တာဗျူးတစ်ခု ရှိပါတယ်။ ပြန်ရှာနေလို့ တွေ့တာနဲ့ တင်ပေးပါ့မယ်။ အမှတ်မမှားရင်ပေါ့ဗျာ။
သူတို့ဆီက တရားဝင် သံစဉ်ကို ကော်ပီလုပ်ချင်ရင် ၀ယ်လို့ရပါတယ်တဲ့။ အင်မတန်ဈေးပေါတယ်လို့
ပြောတာ ဖတ်ဘူးတယ်။ တခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်း ကော်ပီလုပ်ကြတာ ရှိပါတယ်။
ဒီမှာလောက် အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်…အဲအဲ…ကော်ပီမလုပ်ကြတာတစ်ခုပါပဲ။
လေးဖြူရဲ့ ကဘာသစ်တေး အခွေက ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်ပါဗျာ။
ကျော်ဟိန်းလည်း ထာဝရရှင်သန်နေမယ် ဆိုတဲ့ ကိုယ်ပိုင်သံစဉ် တစ်ခွေလုပ်ဘူးတယ်။
မအောင်မြင်ဘူး။ သီချင်းတစ်ပုဒ်အောင်မြင်ဘို့မှာ သံစဉ်က အများကြီးအရေးပါပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကော်ပီခွေတွေမှာ သံစဉ်က ကောင်းပြီးသားတွေဆိုတော့ အောင်မြင်ဘို့ ပိုလွယ်ပါတယ်။
ဘလက်ရေ….။ ထာဝရရှင်သန်နေမယ်က ပြင်သစ်ကအောပရာတစ်ခုလို့ မှတ်ထားဘူးတယ်နော်…။ ပြန်ကြည့်လိုက်ဦး …။ သိလား…..။ ငါလည်း ဟိုဟာဖတ်ရ ဒါဖတ်ရနဲ့ အိပ်ချင်လာပြီ ၀ှါး ……………
ဆရာတို့ ရေ ကျနော် အမြင်လေး ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်… မှားတာလေးတွေ ပါသွားရင်လဲ ခွင့်လွှတ်ကြပါ။
ကောင်ပီတွေ ရှိနေသေးတာ လိုအပ်နေသေးလို့ ရှိနေတာလို့ဘဲ ထင်ပါတယ်။
ဘာလို့ လဲ ဆိုတော့ … ဖွင့်ဖြိုးမှု အားနည်းနေသေးတော့ ကိုယ့်ထပ်ကောင်းတဲ့ အရာ တွေ ကို အတုခိုးပြီး အတုလိုက်လုပ်နေကြရတာပေါ့ဗျာ။
တကယ်လို့ မြန်မာ music က အာရှ အဆင့်လောက် ဈေးကွက်တွင်နေပြီဆိုရင်တော့ ဒီကော်ပီကိစ္စ ဆွေးနွေး သင့်ပြီလို့ ထင်ပါတယ်။
အဲလိုဘဲ … တခြား စီးပွားရေး ကိစ္စတွေ မှာ ဖွင့်ဖြိုးပြီးသားသူတွေနဲ့ တန်းတူ ကြိုးဝိုင်းထဲ ထည့်လိုက်ရင်တော့ …. ကျနော်တို့ တတွေ တတွေ……
ကို ရွှေမင်းသားရေ ….
မခံစားနိုင်လို့ မန့်လိုက်ပြီဗျာ …. အစ်ကို့ကို ဖောင်းတာတော့ မဟုတ်ပါဝူး..
အခြေအနေကို လက်မခံနိုင်လွန်းလို့ပါ …
ကျုပ်တိုိ့ကို နှစ်ပေါင်းများစွာ ဆီစွပ်လာခဲ့တာ မခံစားနိုင်လို့ပါဗျာ…
ကျနော် အထက်မှာ မန့်ခဲ့သလိုဘဲ three-chord-pop-metal လောက်လေးဘဲ
ချပြပေးမယ်ဆိုရင်တောင် …(တခြား ရွေးစရာ မရှိလို့သော်လည်းကောင်း …ကျနော်
တို့က သူရို့ကိုဘဲ အားပေးနေမှာပါ…)
ခုဟာက သူရို့အချင်းချင်း ပြိုင်တာ ဆိုင်တာ … အသာရချင်တာ…(အော် …နဂိုရှိမှ နဂိုင်းထွက်တာရယ်)
ခုဟာက …ကမ္ဘာကျော် သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲ လို ဖြစ်နေတယ်. …
(တတ်လို့တော့ မဟုတ်ဘူး ခံစားမိသမျှကို နောက်မှ သီးခြားရေးဦးမယ်ဗျာ …)
ကျုပ်တော့ ကော်ပီကို ရွံတယ်….
ကူးထားတာ ကို ကူးထားပါတယ် လို့ မပြောရင် တော့ လက်ခံ နိုင်စရာ မရှိဘူးပေါ့။
ကျနော် ဂီတ အကြောင်းတကယ် နားမလည်ပါ။ အမှား ပါရင် ခွင့်လွှတ်ဖို့လဲ ထပ်ပြောချင်ပါတယ်။
ကျနော် အမြင်က သင်ခန်းစာမကျေသေးလို့ ကူးရေးနေရတယ်လို့ ထင်တာဘဲ။
စာမကျေသေးတဲ့ သူကို ဇွတ်အတင်း အလွတ်ရေးခိုင်းရင် ကို့ယို့ကားယားတွေ ထွတ်လာမှာပေါ့။
နောက်ပြီး ဘယ်အရာမဆို အရင်ဦးဆုံး အများလက်ခံလာအောင် အသစ်တစ်ခု ဖန်တီးရတာနဲ့ နောက်ကနေ အသာကူးချရတာနဲ့ ဘယ်အရာက ဘယ်လောက် ခက်ခဲမလဲ ဆိုတာ ကျနော်သဘောပေါက်ပါတယ။်……။
သည်လိုရှိပါတယ် အစ်ကိုရေ ….
စာမကျေလို့ ကူးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ ….
၁၉၈၀ပြည့်လွန်နှစ်တွေ …အစောပိုင်း ၁၉၉၀ပြည့်နှစ်တွေမှာ
ကျနော်တို့ဆီမှာ ကတ်ဆက်တိပ်တောင် ရှားပါးသကိုးဗျာ ..
သာမန် လူတယောက်အနေနဲ့ မူရင်း တေးသီချင်းကြားဖူးဖို့ နားထောင်ဖို့ …ဝေးစွ၆ပါး ….
သည်တော့ သည် gap ကို လုပ်စားကြတယ်…ဆိုပါတော့ …
ပြည်သူတွေ … မူရင်းတွေ နားထောင်ဖူး ကြားဖူးခံစားဖူး
တဲ့ခေတ်ရောက်တော့လည်း လုပ်စားတာ ရပ်မသွားပါဘူး ….
(အရှိန်ကလေးသာ နည်းနည်း တန့်သွားတာ ….)
သင်ခန်းစာမကျေသေးလို့ ကူးတယ်ဆို ..အင်း …
ဟုတ်ကဲ့ ..ကွယ်လွန်သွားရှာကြပြီ ဖြစ်သော်လည်း ….မချမ်းသာသွားရှာတဲ့
ကိုဗဒင် ကို စိုးလွင်လွင် နဲ့ ကိုငှက် တို့ကို မရှက်ကြဘူးလားလို့ မေးချင်ပါတယ်…
ငုတ်တုတ်ထင်ရှား ဆြာ စိုင်းခမ်းလိတ် တို့ …ဆြာ ကိုနေ၀င်းတို့ရော ??
ခေတ်ပြိုင် တွေထဲကဆို …တောဂေါ်လီကြီး မာရဇ္ဇ ကိုရော??
လူသစ်တန်း လို့ ပြောလို့ ရတဲ့ထဲကဆို …ဓီရာဓိုရ် ရော ..အရိုးရော ???
(သည်လူတွေ အားလုံး ၁၀၀% copy ကင်းရှင်းတယ်လို့တော့ မဆိုလိုပါ…)
ဟုတ်ပါတယ် ..ကိုယ်ပိုင်ပဲ လုပ်ရမယ်ဆို …စာမကျေတဲ့အတွက် ..
(music university မရှိတဲ့အတွက် … infra-structure မကောင်းတဲ့အတွက်…)
ဖန်တီးမှု အဆင့် နိမ့်နိမ့်ဘဲ ထွက်လာမှာပါ …ကျနော် အထက်မှာ ရေးခဲ့သားဘဲ
three-chord-pop-metal ပါဆို …သို့သော် လိပ်ပြာသန့်လိမ့်မယ်ဗျ…
အဲ့သည့် အနုပညာက သန့်စင်မွန်မြတ်ရင် သန့်စင်မွန်မြတ်သလောက် ….
(ကျုပ်တို့ကလည်း သည်လူတွေကို ချစ်ပြီးသား
လက်ခံပြီးသားပါဗျာ ….အားပေးကြမှာပါပဲ …)
အနီးစပ်ဆုံး ခံစားပြရရင်တော့ဗျာ….. နိုင်ငံခြားသား သူငယ်ချင်း တွေနဲ့
အပျော်တမ်းတီးကြ ဆိုကြတဲ့ ပါတီ တခု ဆိုပါတော့ …အဲ့သည့်မှာ
ကျုပ်လက်ထဲ ဂစ်တာထည့်ပေးလိုက်ရင် ….လူလည်အာရှသား တီးမယ်ဗျာ..
ဘယ်လောက်ကြိုက်ကြိုက် ….Dream Theater ရဲ့ another day ကို
စာသားပြန်သွပ်ထားတဲ့ အတိတ်မြက်ခင်းစိမ်းတော့ မတီးဘူး….
(သည်၂ပုဒ်ရဲ့ ဂီတပိုင်းဆိုင်ရာ standard က အလွန်ကွာပါတယ် …
ဒါပေမယ့် ခိုးပြီး ၀ှက်ပြီး စားရတဲ့ ကြက်သားဟင်းထက်….ထမင်ကြမ်း ပဲပြုတ်ဆီဆမ်း
လေးဘဲ ..ပို မြိန်တယ်ဗျာ …)
ပြောရင်း ပဲပြုတ် စားချင်လာဘီ …
အံမယ် … ရွက်အန်ဆာ တောင် လုပ်ထားသေး …
အင်းလေ. ..သူက ဖွ …နာကမနေနိုင် လျောက်မန့် ..
ပီး … သူမဟုတ်တဲ့ ရုပ်ရီးနဲ့ အဆိုဒေါ်ဒွေ …
မင်းသ္မီးဒွေ လာရင် …တိုက်ပုံး အမည်းကြီး ၀တ်ဝတ်ပီး ကြိုရတာ အမော…
ရှိုးပွဲတွေ သွင်းရင်များ … … နှုတ်ခမ်းမွေး ကားကား ကားကားနဲ့ …..
နာ့မှာလော့.. …ဘယ်နေ့ချောင်းရိုက်ခံရမလဲ မသိ…….
တော်ဘီ ..ကစ်သိုပြောတာအမှန်ဆုံးဘဲ ….
ကျန်းမာခြင်းသည် လာဘ်တစ်ပါး …
သဂျီးရေးသမျှ မမန့်အား ……
အိပ်ထမတင် ဂိဂိရေ အိပ်မနေပါတော့နဲ့ဗျာ
လေးဖြူရဲ့ လိပ်ပြာခွေက ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်တွေပါ အစပိုင်းက ကော်ပီတွေနဲ့အောင်မြင်ခဲ့ပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်တွေကိုလဲ ကြိုးစားပြီးလုပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ အခုအချိန်မှာ ကမ္ဘာက ရွာကြီးဖြစ်နေပြီဆိုတော့ အရင်လို မသိမသာရော သိသိသာသာပါ ကော်ပီထားတာက တစ်ချိန်ချိန်မှာ ပြဿနာအကြီးကြီးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ တရားတွေများစွဲရလို့ကတော့ တေးရေးတွေရော တေးဆိုတွေရော ဒေ၀ါလီခံရမယ်ထင်ပါတယ်။ ပထမဆုံးကတော့ ၀ါကာဝါကာဘုရင်မနဲ့ ဂရမ်မီဆုယူမယ့်မမ တွေဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ် ကော်ပီနဲ့ ဂရမ်မီယူမယ်လေ။ ကျွန်တော်နှမျောတာတော့ ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်တွေအရေးကောင်းတဲ့ ကိုထူးအိမ်သင်မရှိတော့တာရယ် မောင်မောင်ဇော်လတ် သီချင်းတွေ သိပ်နားမထောင်ရတော့တာရယ်ပါ ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ လင်းလင်းရဲ့ သီချင်းလေးတွေကိုတော့ ကြိုက်မိတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာ ကျွန်တော်တို့လဲ ကော်ပီတွေနဲ့ယဉ်ပါးခဲ့ပေမယ့် နောက်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်လေးတွေနဲ့ ဂုဏ်ရှိရှိရပ်တည်နိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပဲပေါ့ဗျာ။
ဟိုတုံးက မတွေ့ကြရင် ကိုယ်တို့ဇာတ်လမ်းလေးဟာလေ တစ်မျိုးဖြစ်ခဲ့မယ် တဲ့
နောက်ဆုံးမို့ပြောမထွက်တယ် လယ်သူမလေးချစ်သူကို ခွဲရတော့ကွယ် တဲ့
အလိုက်တူနေတယ် ကော်ပီလား ဒါမှမဟုတ် ဘယ်သူက ဘယ့်သူ သံစဉ်ယူလိုက်သလဲတေ့ာ
တုပပြီးဆိုထားတဲ့ တစ်ချို့သီချင်းတွေဆို အတော်လေးပျောင်ပျောင်လက်လက်ရှိလှပါတယ်
ဥပမာ ဇော်ဝင်းထွဋ် ( ကိုညီထွဋ် ) ရဲ့ နေရာသစ် ဆိုရင် ကီးတွေအတော်မြင့်မြင့် ဆိုထားတယ်
အမြင့်ပျံသမား သီချင်းဆို မူရင်းထက်တောင် ကီးတွေစောက်ကြိုးနဲမြင့်တယ်
လေးဖြူ ( ကိုလေးဖြူ ) ဆိုလည်း တစ်ချို့ ကော်ပီတွေဆိုတာ အတော်ကောင်းပါတယ်
မကောင်းတာကတော့ ထုံးစံအတိုင်း သူခိုးနက္ခတ်နဲ့မွေးတာလေးက အတော်ဆိုးတာဘဲ
ဒီဂျားထဲ သူ့သီချင်း သူများကော်ပီကူးရာင်းတော့ ငိုပြလိုက်သေးတယ်
အိုက်ဒါနဲ့ ဂီတရပ်ဝန်း ဆိုပြီး သီချင်းတစ်ပုဒ်တောင်ထွက်လာသေးတယ်
ပြောလို့သာပြောတာ ကမ္ဘာမကျေသီချင်းတောင် ကော်ပီလားသိဘူး
ဘကြီးဟင်္သာတ ထွန်းရင် တစ်ယောက်ဘဲကျန်မယ်ထင်တယ်
ကျုပ်တို့ မြန်မာတွေ ဟိုဒါလုပ်တာတောင် ဗီဒီယိုကြည့်ပြီး အတုခိုးကြတာသာ
ပြောရရင်တော့ များဂျီး များဂျီး
ဒါတော့ ဘပုရယ်..အဲ့ဒါက မြင်နေကြမို.လို. အကျင့်ပါသွားတာပါ။ အတုမခိုးရပါဘူး
ဆြာချစ်ဦးညိုပြောဘူးတယ် အခုကဘာမကျေသီချင်းက အရင်တို့ဗမာအစည်းအရုံးမှာ ဆရာတင် စရေးပေးခဲ့တာတဲ့ တို့ဗမာအစည်းအရုံးရဲ့ သီချင်းပေါ့ လွတ်လပ်ရေးရပီးတော့လားမသိဘူး နိုင်ငံတော်သီချင်းကို နိုင်ငံသားတိုင်းသိနေတဲ့ တို့ဗမာအစည်းအရုံးရဲ့ သီချင်းကိုနဲနဲပဲပြောင်းပီး အတည်ပြုခဲ့တာတဲ့ အဲ့တော့ နိုင်ငံတော်သီချင်းကိုကော်ပီလို့ မထင်ကြပါနဲ့ ဖအေတူမအေကွဲမောင်နှမတွေလို့ ထင်ပေးပါတဲ့
ဘပု လည်း အတော် ဆြာကျတာပဲ …
ကိုညီထွဋ် ..နေရာသစ်ကို သည်လောက် အတိအကျ သိနေတာ …..
ဟုတ် ….ကိုညီထွဋ် အတော် ဆိုအားကောင်း ဆန်းတက် ..နံဘာဝမ်း ဖြစ်နေတဲ့ ရွှေရောင်ကာလတွေပေါ့ဗျာ….
အဲ့သည့်အခွေက ၁ခွေလုံး ကော်ပီ မဟုတ်ဘူးလို့ ကျနော်ထင်တယ်ဗျ…
ကျနော် အမှတ်မမှားရင်… …နောက်တချိန် မှာ ဂီတလောကရဲ့ ဆြာသမားတွေဖြစ်လာမယ့်
အယ်လ်ဖြူ နဲ့ (ကို)မောင်မောင်ဇော်လတ် တို့ ပွဲဦးထွက် ၀င်ရေးတဲ့ အယ်လဘမ် ခဗျ….
သူတို့ သီချင်းတွေက own tune တွေလို့ ထင်တယ်ခည. ….
(မူရင်းရှာမတွေ့သေးတာလား ကျနော်ပဲ လေ့လာအား နည်းလွန်းတာလားတော့ မသိဘူးဗျာ..)
ကိုသစ်မင်း(ရွာ့ ပညာရှိ ကစ်သို မဟုတ်ပါ…)နဲ့ ဦးထွေး သီချင်းတွေကတော့ ကော်ပီပေါ့နော်..
သည်အခွေထဲက ပျက်သုန်းခြင်း ကိုတော့ ယနေ့ထိ နားထဲကမထွက်ဘူးဗျာ ….
3/4 timing slow rock သီချင်းလေးလေ … ကိုညီထွဋ်လည်း အတော် နှစ်သက်တယ်ထင်တယ်
တခြား အဆိုတော်တွေနဲ့ ပေါင်းဆိုတဲ့ ထစ်ခြုံးမိုး album မှာ ပြန်ဆိုထားတယ်ဗျ….
ခုချိန်မှာ အဲ့ဒီ ကော်ပီ ကိစ္စများက တကယ့်ကို သတိထားပြီး လုပ်ရတော့မှာပါ
အစစအရာရာ နိုင်ငံတကာနဲ့ ၀င်ဆန့်နိုင်အာင် ရင်ဘောင်တန်းရတော့မှာ ဆိုတော့ သူများလို အဆင့်မှီဖို့ လိုလာပါပြီ….
စိတ်ထဲမှာ ခံစားမိသလောက်လေး ပြောကြည့်ပါရစေ..
၁။အဲ့ဒီလို အများစုက ကော်ပီတွေချည်း ဘာဖြစ်လို့ ဖြစ်ရတာလည်း ဆိုတော့ အဲ့ဒီ ဂီတရဲ့ မူရင်း အစစ်ကိုက အနောက်က လာတာပါ .. ကိုယ့်ဂီတ မဟုတ်ပါဘူး..ခေတ်ရေစီးကြောင်းအရ တကမ္ဘာလုံး လက်ခံလာတဲ့ ဂီတ အနုပညာပါ။
၂။သူများ ဂီတကို ကိုယ့်မူပိုင်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင် သူများတွေလို စနစ်တကျ သင်ယူတတ်မြောက်နိုင်ဖို့ အသစ်အဆန်းကို ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်အောင် ဖန်တီးနိုင်ဖို့ နည်းပညာ ၊ သင်ပေးနိုင်တဲ့ ပညာရှင်လိုပါတယ်..
ကျမတို့ဆီမှာ အဲ့ဒီလို ခေတ်ပေါ်ဂီတ အနုပညာများကို ဖန်တီးနိုင်ဖို့ အခြေခံက စလို့ လေ့လာ သင်ယူနိုင်တဲ့ ကျောင်း ၊ တက္ကသိုလ် ဆိုတာ မရှိပါဘူး… (ပန်တျာကျောင်းပဲ ရှိပါတယ်)
သူများဆိုတာတွေကိုပဲ ကိုယ့်နည်း ကိုယ့်ဟန်တွေနဲ့ လေ့လာပြီး သင်ယူကြတာပါ။
တကယ်တတ်ကျွမ်းသူများ ဖန်တီးနိုင်တဲ့ ပါရမီရှင် ပညာရှင်များသာ ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်ဖန်တီးနိုင် ကြပါတယ်။
မြို့မငြိမ်းရဲ့ သီချင်းများဟာ သေချာ နားထောင်ကြည့်ရင် ဗီသိုဗင်ရဲ့ တေးသွားများလို တခါတခါ အတက်အကျ ငြိမ့်ငြိမ့်လေးနဲ့ မျောသွားတာပါ။ တန်းမှီပါတယ်။ ခုနေသူများမေးလို့ ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်တာဆိုရင် အဲ့ဒါတွေကိုပဲ ထိုးပြစရာရှိပါတယ်။
နောက်ပိုင်း တချို့တွေ လည်း ရှိပါတယ်။ သို့သော် အားကျိုးမာန်တက်ကြိုးစားရမဲ့ အစား အလွယ်လမ်းသာလိုက်ပြီး ကော်ပီရင်း ကော်ပီကြပါတယ်။ ခုထိပါ။ ဟစ်ဟော့က အစပါ။ ဘယ်နေရာမှ မလွတ်ပါဘူး။
သူများ နိုင်ငံများကတော့ ကိုယ်ပိုင် pop ဂီတ စသဖြင့် ဖန်တီးနိုင်သလို ကမ္ဘာမှာလည်း ကျော်ကြားနိုင်ကြပါတယ်။ wonder girls ကစတဲ့ ကိုရီးယား ရေစီးကြောင်းက အခုချိန်မှာ အနောက်မှာတောင် နေရာရလာပါပြီ။ ဒီမှာ ကူးကောင်းတုန်းပါ။
အားမနာတမ်းပြောရရင် ဂီတတင် မဟုတ်ဖူး ရုပ်ရှင်ကလည်း ဟိုးအောက်မှာပါ။ ခပ်ပေါပေါ ခပ်ညံ့ညံ့တွေရယ် ကူးချတွေရယ်ပါ။
ကြော်ငြာများက အစပါ။ ကြော်ငြာသီချင်းတွေက အဆိုးဆုံးပါ။ ချန်ဂင်ကားလွှင့်တုန်းမှာ မပြီးတောင် မပြီးသေးဘူး သူ့လိုဝတ် သူ့ သီချင်းနဲ့ ကြော်ငြာလာတယ်။ ၀ါကာဝါကာက အဆိုးဆုံး။
ရှက်တတ်ရင် တော့ ရှက်စရာမက လဲသေဖို့တောင် ကောင်းနေပါပြီ။
အဲ့ဒီကော်ပီကိစ္စနဲ့ မှတ်လောက်သားလောက် အရှက်တကွဲ တရားစွဲခံရတာမျိုးဖြစ်လာရင်တော့ ဆင်ခြင်ပါလိမ့်မယ်။ အရေးမယူရင်တော့ လုပ်မြဲလုပ်နေအုန်းမှာပါ။
ရှေ့လျှောက်ကော်ပီ ကိစ္စဒီထက်ပိုပြီး အရှက်ရပါလိမ့်မယ်။ မပြုပြင်မပြောင်းလဲရင်ပေါ့။
၀ါသနာရှင်များအတွက် စနစ်တကျနဲ့ လေ့လာပြီး တတ်ကျွမ်းအောင်သင်ကြားပေးနိုင်မဲ့ ကျောင်းမျိုးပေါ်လာအောင် အကောင်အထည်ဖေါ်ရမှာပါ။
အခုလူမှုဗေဒနဲ့ ဓလေ့ထုံးစံကို သုတေသန လုပ်တဲ့ အဖွဲ့ ရှိလာပါပြီ။ ပြောရရင် ဘယ်ဟာက ကိုယ့်ဟာ ၊ မှီငြမ်း၊ ကူးချ သေချာစနစ်တကျနဲ့ အရာအားလုံးကို အမှန်အတိုင်း အရှိအတိုင်း သုတေသန လုပ်မဲ့ အဖွဲ့ ပေါ်လာပါပြီ။ နောက်အဲ့ဒီထက်ကျယ်ပြန့်ပြီး စနစ်တကျ နဲ့ ပတ်သတ်ရာ နီးစပ်ရာ နိုင်ငံများထိပါ လေ့လာ သုတေသန လုပ်ပေးရမှာပါ။
နောက်ဆို အကြောင်းအရာ ပေါ်မူတည်ပြီး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လေ့လာ သုတေသနလုပ်ပြီး အမှန်ကို ပြောပြမဲ့ သုတေသန စာတမ်းများ ပေါ်ထွက်လာဖို့ စောင့်နေရတော့မှာပါ။ အဲ့ဒီအခါကျရင် တော့ အရှိကို အရှိအတိုင်းလက်ခံနိုင်ဖို့ရော ကြိုးစားဖို့ရော အားမွေးထားရတော့မယ် ထင်ပါတယ်။
ပုရှ့် ရဲ့ ကော်မန့်ကို အခြေခံပီး မန့်ပီဗျို့..
(မမပုရှ် ကို တိုက်ခိုက်ခြင်းမဟုတ်ပါ)
အစ်မ ပြသထားတဲ့ အကြောင်းအရာ ကိုပဲ target လုပ်ပြီး ပြောသွားမယ်နော…
ဟုတ်တယ် အနောက်ကလာ တာဘဲ …
ဟုတ်တယ် …သည်လို ဖလိုး ပဲ ရှိတာဘဲ….
ကျုပ်တို့ အား စိုက်ဖို့ကောင်းခဲ့တာ … ကို …ကျုပ်တို့ အရှက်တရားမဲ့ခဲ့ကြတာ ….
(သူတို့ လို့ မသုံးဘူးနော …. ဖန်တီးသူတွေအားလုံး ကို ညွှန်းပီး … အားပေးခဲ့တဲ့
ကျုပ်တို့ ပိတ်သတ် ဆိုတဲ့ လူတွေမှာလည်း တာဝန်ရှိတယ် ….)
ဖွတယ် ဘာညာ ဆိုပီး ကွိုင်ရှာမယ့် ..
မင်းကဘယ်လောက် သိလို့တတ်လို့ ပြောနေသလဲ ဆို စွာရင်တော့
ပြောပြစရာ အရည်အချင်းမရှိပါ …..သို့သော်..
အဲ့လို စွာမယ့်ဆြာသမား ရဲ့ iTunes နဲ့ ကျနော့် iTunes နဲ့တော့ ယှဉ်ပြရဲကြောင်းပါ…
(သည်ဟာတွေသုံးပြီး ထိပ်တန်းရောက်လာတဲ့ ဆြာသမားတို့ …
ခင်ဗျားတို့ …လိုင်စင်အရ …ခေါ်ပီရွိုက်အရ ……အစိမ်း ၁၀၀ဖိုးပြည့်အောင်ရော အနှီ ပဂေးကြီးတွေကို
အားပေးဖူးပါရဲ့ လားဗျာ….(သည်ဘဲတွေကို ခိုးချတာ next stageနော ….အခွေအစစ် နားထောင်ဖူးသလားမေးတာ…)
အင်း…. ကျုပ်တို့လို ဘာမှ မသိ ဘာမှမတတ်တဲ့ ပိတ်သတ်ထက်တောင် ပိုပီး …အနုပညာရှင်စိတ်ကင်းမဲ့ပီး..
သူခိုး ၀ါဒ လွှမ်းမိုးပီး …ထင်ရာစိုင်းမဲ့/ တဲ့…လူမပီသတဲ့ ပိတ်သတ် မဖြစ်နိုင်လောပါဝူးလို့ ..ဆန္ဒပြုရင်း………………..
ကော်ပီတွေ သူခိုးဝါဒကျင့်သုံးသူတွေ ဘာဆက်ဖြစ်မလဲ စောင့်ကြည့်ရတော့မယ်။
သံစဉ် ပိုင်ရှင်တွေက အရေးယူ တရားစွဲမယ်ဆိုရင် တော့ ဒုက္ခ။
Intellectual Property (ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်စွမ်းနဲ့တီထွင်ပိုင်ဆိုင်သောပစ္စည်းလို့ဆိုမလား..)
မြန်မာပြည်မှာ နိုင်ငံခြားက (သူတစ်ပါးငွေကုန်ကြေးကျခံပြီး အသံပြာလက်ညောင်းအောင်ဖန်တီးထားတဲ့) သီချင်းကောင်းလေးတွေကို မြန်မာမှုပြု ပြန်လည်တေးဆိုထုတ်လုပ်ပြီး ဈေးကွက်မှာရောင်းတဲ့အခါ အသင့်စောင့်နေတဲ့ သူခိုးလေးများက အေးအေးဆေးဆေး ပြန်ကူးရောင်းနေပါတယ်..။ (၀ဋ်လည်ခြင်းပါ..)
ဗီဒီယိုဆရာများလည်း ခိုးကူး ဒုက္ခရောက်နေကြပါတယ်..။
ကော်ပီသီချင်းတွေကိုဘဲ အပြစ်မပြောကြပါနဲ့ဗျာ..။ ဘာသာပြန်စာရေးဆရာကြီးများလည်း.. မူရင်းဆရာဆီကခွင့်ပြုချက်ယူလေ့ မရှိပါဘူး..။
ဆရာဝန်လောင်း၊ အင်ဂျင်နီယာလောင်းများလည်း ပြဌာန်းစာအုပ်တွေကို (မူရင်းမ၀ယ်နိုင်လို့၊ ရှာရင်လည်း အခက်အခဲရှိလို့) ကော်ပီများဘဲ ၀ယ်ယူသုံးစွဲကြပါတယ်..။
ကွန်ပျူတာဆော့ဝဲများ၊ OS များလည်း (အများစု) ဘယ်မှာ မူရင်းသုံးကြလို့လည်းခင်ဗျာ…။
(ဘီဂိတ်က အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအတွက် Windows OS ကို 1US$ စတိထားတယ်လို့ ဖတ်ဖူးပါတယ်..)
ကမ္ဘာမှာလည်း Apple တို့၊ Samsung တို့ HTC တို့ သူခိုးကိုယ်ခိုး အပြန်အလှန် စွပ်စွဲနေကြတုံးဘဲ…။
Intellectual Property Right ကို မကာကွယ်မစောင့်ရှောက်နိုင်ရင် ကိုယ်ပိုင်စစ်စစ် အသစ်ဖန်တီးမှုများ အားနည်းနေမှာပါ..။ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ရင်တော့ ကိုယ်ပိုင်တီထွင်ဖန်တီးမှုတွေ အားကောင်းလိမ့်မယ်လို့ ထင်မြင်ယူဆကြောင်းပါ..။
ကျွန်တော် ကိုဆန်နီ နဲနဲဆွေးနွေးပါရစေ။
မြန်မာနိုင်ငံ မှာ ကော်ပီ လုပ်သူများ (သူများ tune ကိုယ့်စာသားနဲ့ဆိုတဲ့လူ ၊တေး ရေးတဲ့သူ၊ သူများသီချင်းကို စင်ပေါ်အခကြေးငွေယူတဲ့သူ၊ထုတ်လုပ်သူ) ထိုသူများအားလုံးကိုတရားစွဲမယ်ဆိုရင် အားလုံးထက်ပိုစွဲရမယ့်သူကတော့ ဆင်ဆာအဖွဲ့ပါ သူတို့ ကော်ပီ(ခိုးတာ)သိရက်နဲ့ခွင့်ပြုတဲ့အတွက် သူတို့ ကို
ဒေ၀ါလီခံလောက်အောင် စွဲရမယ်ထင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လေးဖြူ တစ်ယောက်တည်းမှ မဟုတ်တာ နော်..အများကြီးပဲ။။။ ဟိုရှေးကတည်းက ကော်ပီ ဆိုနေကြတာ။ ဆင်ဆာအဖွဲ့ ကသိရက်နဲ့ထုတ်ခွင့်ပြုတဲ့ အတွက်(အခွန်လည်းကောက်သေး) သူတို့ ကို သာ ပြဿနာ လုပ် ချင်း လုပ်ရင် ပိုလုပ်သင့်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မဖွံဖြိုးသေးတဲ့ နိုင်ငံ ကဆိုတော့ ခွင့်လွှတ်မှာပါ။ မည်သူ့ကိုမှ မထိခိုက်စေချင်တာအမှန်ပါ။
ဟိုသဂျီးမြှောက်ပေးတိုင်းခင်ဗျားတို့လည်း စွတ်ပြီး ပြောနေကြတာ
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ မတိုးတက်သေးရင် ရရှိတဲ့ အခွင့်ရေးလို့ပြောရမလား
အရပ်စကားနဲ့ပြောရရင် လုပ်ပါစေကွာ ခမျာတို့ဆင်းရဲပါတယ် ဆိုတာတွေ ရှိတယ်လေ
လက်ရှိ တရုပ်တို့ ထိုင်းတို့ဆို ကော်ပီတွေ ကို သောက်သောက်လဲလုပ်နေကြတာဘဲ
လွန်ခဲ့တဲ့ ဖွံ့ဖြိုးစ အချိန်လို့ဆိုရမလားနော
အဲ့သည်အချိန်တွေတုန်းကဆို လုံးဝကို အဖမ်းအစီးမရှိဘဲ ဖ၇ီးရတာဘဲဂလား
နောက်ပိုင်း တိုင်းပြည်တိုးတက်လာတော့ ပစ္စည်းအတုတွေဖမ်းတယ်
ဥပမာ ထိုင်းနဲ့ တရုပ် ကအတုတွေကို ဥရောပ ဝင်ခွင့်ပိတ်တယ်
ကျုပ်တို့ ဗမာပြည် က မြောင်းထဲမှာဘဲရှိသေးတယ်လို့ဆိုရမဲ့အတွက်
ကျုပ်က အမျိုးသားရေးအမြင်နဲ့ မြန်မာသီချင်းတွေကို
အထည်ကြီးပျက် အမေရိကန်သားသဂျီးပြောတိုင်း မြန်မာပြည်အခြေနေနဲ့
ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအနေနဲ့ ကော်ပီ အခွင့်ရေးတွေ မျက်ကွယ်ပြုပေးတာ
လုပ်ပါသဂျီးရဲ့ မြန်မာ့ ဂီတဘိုးအေကြီးတွေရဲ့ ရင်ထဲက အလုံးကြီးတွေ
ပြော ပြော ပြော ပြောလဲမောတော့ မယ်
ဟိုလူတွေ ကော်ပီဆို… ဒီလူတွေ ကော်ပီဆို… IC လဲ ကော်ပီဆို… အားလုံးလဲ ကော်ပီဆို…
စကားမစပ် (သဂျီးဖွသော လေသံဖြင့် )
မြန်မာပြည်မှ ကော်ပီမဆိုတဲ့ တေးသံရှင်များရှိရင်
ဖော်ပြပေးပါလား… ကိုရင်တို့က အိုနေပြီဆိုတော့
ကိုအံ့ကြီး၊ မြန်မာပြည်သိန်းတန်၊ တွံ့တေးသိန်တန်လောက်ပဲ
တို့ဗမာအစည်းအရုံးကို နည်းနည်းပြောင်းထားတဲ့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော် သီချင်းလည်း အနောက်တိုင်းဂီတကို မှီးထားတယ်လို့တော့ စာရေးဆရာသစ္စာနီရေးတာကိုဖတ်ဖူးတယ်ဗျ ဘာဂီတအမျိုးအစားလည်းတော့ မသိတော့ဘူး . . ..
လက်ရှိကျွန်တော်တို့ ကြားနေရတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ဆီ ရော့်ကာကြီးတွေကတော့ အုံးကျုံးမှ အုံးကျုံးပဲလုပ်တော့မယ်လို့ ပြောတာကြားနေရသလို လုပ်နေကြတာကိုလည်း တွေ့မိပါတယ်။ အုံးကျုံးစစ်မစစ်တော့ တော့ ကျွန်တော်တို့လည်း မသိပါခင်ဗျား…..
မမန့်ဘူး မမန့်ဘူးနဲ့ …မန့်လိုက်ပါဦးမယ်…
၁တုံး မျို လည်း အဟွာ …၂တုံးမျိုလည်း အဟွာဘဲဟာ …(နော့်သဂျီး …)
ဂလိုဗျ ….သီချင်းတွေရဲ့ တီးလုံးတွေ အကြောင်းဘဲ
ရိုးရိုးလေး စဉ်းစားကြမယ်ဗျာ .. သည်ဖီလင် သည်စာသား
ကို အားဖြည့်ဖို့ သည် တီးကွက် သည်မယ်လိုဒီ ကို သီကုံးကြတာ …
အသံကာလာတွေ တမ်ပိုနဲ့ ပုံစံအရ ..နွယ်တာတွေကအစ (နွယ်ပင်မဟုတ်ပါ…)
ဆိုတော့ …ကျုပ်တို့ အဲ့လာကို ကော်ပီတယ်ဗျာ ….ဒီသံစဉ်အတိုင်း …
(အဖေကသားကို အမွေပေးသလို တသွေမတိမ်း လိုက်တီးတယ်….)
စာသားကျတော့ ကိုယ်ကြိုက်ရာ သွပ်တယ်.. ..ကဲ .. ဒီသံစဉ်က
ဒီစာသားကို အားဖြည့်ရာရောက်ပါ့မလား …. သက်ဆိုင်မှု ရှိပါ့မလား …
ကဲဒါဆို ကျနော်တို့ …..ဘာသာပြန် ရေးကြမလား …ကော်ပီတော့ ကော်ပီပေါ့
translation ပုံစံပေါ့ဗျာ ….. ရှိတော့ ရှိတယ်နော မလွယ်ဘူး ….
(အထက်ပါ အကြောင်းအရာတွေက …လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀နှစ်လောက်က ဆြာ စိုင်းခမ်းလိတ် ကို
ဗျူးထားတာလေး ပါ.. …မှတ်သားမိသလောက်လေး ..ပြန်ရေးတာ …)
သြော် ငါတို့နှယ့် ဂလောက်လေးတောင် အားမထုတ်ခဲ့ကြတာကိုး …. ထှောက်ခ် …….
ကွာတယ်ဗျ ..ကွာတယ်. .အနှစ်သာရပိုင်းမှာ …. ပိုးဇိုးပက်စက် ဖြစ်ကုန်တဲ့ သီချင်းဒွေ …
မူရင်းမယ်လိုဒီ ကို မြောင်းထဲပို့တဲ့ စာသားတွေ …..
(ခိုးချတာ ခေါ်ဖီရွိုက် ….intellectual propertiesကြီးကြီး ကျယ်ကျယ် ပြောသေးဝူးနော …)
ဒါတွေပြောရင် ဒေါတွေပါမယ် … ရှိဇေ……
သည်တော့ကာ …ဆိုတဲ့ လူတွေ ကိုယ်စားလည်း ရှက်တယ် ..ရေးတဲ့ ဆြာတွေ ကိုယ်စားလည်း ….
နောက်ဆုံး နားထောင်မိအားပေးမိတဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်လည်း …….. တခုတ်တရ ပိုစ့်တင်တဲ့
သဂျီး ကိုယ်စားလည်း ……….
အခု ထက်ထိ ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ CopyRight Law မရှိသေးဘူး ထင်ပါတယ်။
Pirate ခွေတွေကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာတင် မက ဒီဘက် အရှေ့တောင် အာရှ မှာတွေ တော်တော် တွေ့နေရတာပဲ။
သီချင်းပဲ မဟုတ်ပါဘူး ရုပ်ရှင် ဆော့ဖ်ဝဲ အဲ့ဒါတွေလဲ ဒီဘက်တွေမှာက ခိုးကူးတွေ ရုပ်ရှင် ကို ကူးပြီး ပြန်ရိုက်တာတွေ ရှိပါတယ်။
ကျနော် သိချင်တာက ခု စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု ကို ပြန်ဖွင့်လိုက်လို့ ရှိရင်
CopyRight Law ပါ လာမှာလား? အဲ့ဒါ ပါလာရင်ကော အရင် အဲ့ဒီ ဥပဒေ မရှိတုန်းက ကူးထားတာတွေကို လျော်ကြေးတောင်းမှာလား ဒါမှ မဟုတ် ဒီ ဥပဒေ ပြဌာန်းပြီးတဲ့ အချိန် နောက်က စလို့ စပြီး အရေးယူမှာလား မသိဘူးနော်။
နောက်ပိုင်းက စပြီးတော့ အရေးယူမယ် ဆိုရင်တော့ တော်တော်လေး ကောင်းသွားမယ် ထင်ပါတယ်.. ရှေ့တုန်းက ဥပဒေ မရှိလို့ လုပ်တုန်းက လုပ်ထားတာတွေ ကို ပြည်ဖုံးကား ချလိုက်ကြပါပေါ့။း)
နောက်လဲ အဲ့လို မကူးနဲ့တော့ပေါ့။
(ပြောမယ့်သာ ပြောရတာ ကိုယ်တိုင်လဲ ခုထိ သီချင်းလဲ အင်တာနက်က ဒေါင်း ရုပ်ရှင်လဲ အင်တာနက်က ဒေါင်း ဂိမ်း/ဆော့ဖ်ဝဲ လဲ အင်တာနက်က ဒေါင်း လုပ်နေရတုန်းပါပဲလေ….)